सुनमा ढुक्क हुनुहोस्ः अध्यक्ष दियाली - Arthapage
सुनमा ढुक्क हुनुहोस्ः अध्यक्ष दियाली
प्रकाशित मितिः २७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १४:२० November 13, 2018
सुन किन्दा कस्तो किन्ने भन्ने अन्यौलता सबैमा हुन्छ । शुद्धताका कुरा पनि आउँछ । धेरैले आशंका गरेका हुन्छन् । तर व्यवसायी भने त्यस्तो कुनै आशंका नगर्न र ढुक्कसंग किन्न आग्रह गर्छन् । प्रस्तुत छ, यिनै बिषयमा बाँके सुनचाँदी तथा गहना व्यवसायी संघका अध्यक्ष बुद्धि दियालीसंग गरिएको कुराकानी :
सुनमा ग्राहकहरुका तर्फबाट सुनको शुद्धतामा आशंका गरिन्छ । के भन्नुहुन्छ ?
दुःख कमाएको पैसा सुनमा मात्र होइन जुनसुकै कुरामा लगाउँदा आशंका मान्ने कुरा अन्यथा होइन । तपाई हामी जसले पनि एकपटक गहन खरिद गर्न गयौं भने एकपटक सोच्छौं । म हरेक ग्राहकरुलाई यस्ता कुरामा गम्भीरतापूर्वक सोच्न आग्रह गर्छु । तर अर्को कुरा के पनि भन्छु कुनै पनि व्यवसायीले आफ्ना ग्राहकलाई ठग्ने नियत राखेको हुँदैन । त्यसरी ठग्दैन पनि । जोकोही अहिले कसैको नजरमा पर्छ नै । ठगेर कति दिन पो उन्मुक्ति पाउँछ होला र ? म के भन्छु भने निसंकोच भएर तपाईहरु खरिद गर्नुहोस् त्यस्तो आशंका मान्नुपर्ने केही छैन ।
बजारमा कुनै ग्राहक ठगिए तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?
यदि कुनै पनि ग्राहकलाई त्यस्तो केही लाग्छ भनेर सरोकारवाला निकायलाई भन्नुहोस् । हामीलाई भन्नुहोस् । यथाथए के रहेछ, बुझ्छौं र तपाईलाई न्याय दिन्छौं । तर त्यस्तो हुँदैन ढुक्क रहनुहोस् ।
बर्दियामा ठगीका कुराहरु आए ?
त्यस बिषयमा धेरै कुराहरु बाहिर आएका छन् । कति भ्रम त कति यथार्थ पनि । हेर्नुहोस् बिदेशबाट सुन आउँदा समेत सुन पठाउनेले ढिब्बामा शतप्रतिशत लेख्न सकेको हुँदैन । शतप्रतिशत नलेखेको सुनलाई हामीले गलाएर गहनाका रुपमा आकार दिने हो । उत्पादकले नै शतप्रशित भन्न नसकेको ठाउँमा हामी व्यवसायीले त्यसो भन्न सक्छौं ? धेरै ठग्ने कुरा आए अर्कै कुरा हो । तर गलाउने क्रममा अति थोरै सुन तलमाथि हुँदा अपराधि जस्तो व्यवहार गर्ने ? व्यापारीलाई हिरासतमा राख्ने काम भएका छन् । यथार्थ के हो बुझ्नुपर्यो ।
पटक पटक यस्ता समस्या किन आउँछन् ?
गरहगना सम्बन्धित अलग्गै ऐन कानुनको आवश्यकता छ भन्न थालेको धेरै भइसक्यो । तर अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । यो क्षेत्र हेर्नका लागि बिज्ञ सहितको अलग निकाय चाहिनुपर्ने हो । त्यो अभावमा हामी व्यवसायी गल्ती नगर्दै अपराधी जस्तो भएर जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।
यसपटक गहना बनाउँदा रसायन हट्ने कुरा बाहिर आएको छ ? खासमा यो के हो ?
अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नेपाली उपभोक्तालाई समेत सुनको गुणस्तर पु¥याउनका लागि रसायनबाट होइन अब जिंक धातुले सुन निर्माणको काम हुनेछ । अहिले रसायनबाट बनेको गहनालाई नम्बरी भन्ने मानिन्थ्यो । एक तोला सुनमा १२ प्रतिशतसम्म रसायन हुन्थ्यो । यो भनेको १२ लालसम्म हो । ग्राहकले २४ क्यारेट सुनको एक तोला गहना बनाउँदा त्यसमा १२ प्रतिशत रसायन कट हुन्थ्यो । सुन पसलले ज्याला त्यसैमा कटाउथ्यो । यसो गर्दा कुनै ग्राहकले सुन धरौटी राख्दा १२ प्रतिशत रसायन कटाएर बाँकी मुल्यांकन
गरेर पैसा पाउथे । तर अब त्यसो हुँदैन । अब करिव ९८ प्रतिशत झण्डै शतप्रतिशत मुल्यांकन
हुन्छ । यसको अर्थ अब ग्राहकले शतप्रतिशत सुन पाउँछन् । यस बिषयमा सुनचाँदी व्यवसायीबीच बाँके, बर्दिया लगायतका क्षेत्रमा बृहदरुपमा छलफल भइसकेको छ । अब बिगतमा जस्तो सुन बनाउँदा रसायनबाटै कटाउने हुँदैन अब । शतप्रतिशत सुन बन्ने भएकाले अलग्गै ज्याला दिनुपर्ने हुन्छ । तर ग्राहकले धेरे पैसा बुझाउनुपदैन ।
प्रकाशित मितिः २७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १४:२० |
Posted in अन्तर्वार्ता, नियमित समाचार, भिडियो
Prevअब उद्यमी बन्ने पालो महिलाको
Nextनेपालगन्जका पहिलो सिए कन्हैयालाल टण्डन